Visa rasmi ah oo Canada ah. Kanada Visa Online | Visa Dalxiiska Kanada
Visa Kanada ee dadka haysta Kaarka Cagaaran ee Maraykanka
Fiisaha Kanada ee Muwaadiniinta Ingiriiska
Visa Kanada ee Muwaadiniinta Isbaanishka
Fiisaha Kanada ee Muwaadiniinta Faransiiska
Visa Kanada ee Muwaadiniinta Israel
Fiisaha Kanada ee Muwaadiniinta Talyaaniga
Visa Kanada ee muwaadiniinta Kuuriyada Koonfureed
Visa Kanada ee muwaadiniinta Boortaqiiska
Visa Kanada ee muwaadiniinta Chile
Nidaamka Codsiga eTA ee Kanada
Codsiga Visa eTA Canada
Shuruudaha Kanada eTA
Noocyada Kanada eTA
Ku safr Canada kaarka cagaaran ee Maraykanka
Visa Dalxiiska Kanada
Booqo Kanada xagga Ganacsiga
Visa Super Canada ah
Fasaxa Fasaxa Shaqada Kanada
Fiisaha Kanada ee Bukaannada Caafimaadka
Talaabooyinka Xiga - Ka dib Visaha eTA Canada
Xaqiiqooyinka ku saabsan Kanada
Goobaha Jiilaalka ee ugu sarreeya Kanada
Goobaha Barafka Sare
Harooyinka cajiibka ah ee Kanada
Booqashada Buuraha Rocky
Booqashada Niagara Falls
Goobaha Dhaxalka Adduunka
Oktoberfest ee Kanada
Xeegada Barafka ee Kanada
Lama -degaanka Kanada ee Cajiibka ah
Socdaalka Kanada ee Joogtada ah
Dhagaxyada Qarsoon ee Kanada
Qoraallo badan »
Xuduudka Kanada iyo Maraykanka ayaa dib u furmay
Covid-19: Kanada waxay soo bandhigtay Baasaboorka Tallaalka
Covid-19: Kanada waxay fududaysaa Xayiraadaha Socdaalka
Kordhinta Visaha Ardayda Caalamiga ah
Xaq u yeelashada Kanada eTA
Codsiga Canada eta
Kanada eTA (Oggolaanshaha Safarka Elektiroonigga)
eTA Canada Visa waa oggolaansho socdaal oo looga baahan yahay dadka safarka ah ee Kanada u soo booqanaya ganacsi, dalxiis ama ujeeddooyin gaadiid. Habkan khadka tooska ah ee eVisa ee Kanada waxa la hirgeliyey laga bilaabo Ogosto 2015 Dowladda Kanada, iyada oo hadafkeedu yahay u saamaxidda mid kasta oo ka mid ah socotada mustaqbalka ee u -qalma inay codsadaan eTA Kanada.
1. Codsiga eTA oo dhameystiran
2. Ku hel eTA emayl ahaan
3. Gal Kanada
Waa maxay Canada eTA ama Canada Visa Online?
Iyada oo qayb ka ah heshiiskii wadajirka ahaa ee ay la gashay Mareykanka ee ahaa in si wanaagsan loo ilaaliyo xuduudaha labada dal, laga bilaabo Ogosto 2015 wixii ka dambeeyay Kanada waxay bilowday a Barnaamijka Ka-dhaafitaanka Visa-ka ee waddamada fiisooyinka laga dhaafay Muwaadiniintoodu u safri karaan Kanada iyagoo codsanaya Dukumintiga Oggolaanshaha Safarka Elektaroonigga ah, kaas oo loo yaqaan eTA Canada.
Kanada eTA waxay u shaqaysaa sidii dukumiinti ka -dhaafis Visa oo loogu talagalay muwaadiniinta ajnabiga ah ee ka soo jeeda waddamo u qalma (Visa Exempt) oo u safri kara Kanada iyagoon ka helin Fiisaha Safaaradda Kanada ama Qunsuliyadda laga dalbaday oo laga helay internetka.
ETA-da Kanada waxay qabataa shaqo la mid ah tan Visa Canada laakiin si fudud ayaa loo helaa hawsha ayaa sidoo kale dhaqso badan. Kanada eTA waxay ku habboon tahay ujeeddooyin ganacsi, dalxiis ama socdaal oo keliya.
Muddada ay shaqeyneyso eTA-gaaga wuu ka duwan yahay muddada joogitaanka. In kasta oo eTA ay shaqeyneyso 5 sano, muddadaada kama badnaan karto 6 bilood. Waad soo gali kartaa Kanada wakhti kasta gudahood muddada ansaxnimada.
Waa hawl deg deg ah oo kaaga baahan inaad buuxiso Foomka Codsiga Visa Canada onlayn ahaan, tani waxay noqon kartaa wax yar ilaa shan (5) daqiiqo in la dhammaystiro. Kanada eTA waxaa la soo saaraa ka dib marka foomka dalabka si guul leh loo dhammaystiro iyo khidmadda uu codsaduhu ku bixiyo internetka.
Sarkaalka CBSA (Wakaaladda Adeegyada Xuduudka Kanada)
Waa maxay Codsiga Dal-ku-galka Kanada?
Codsiga Visa ee Kanada waa foom elektaroonik ah oo online ah sida ay ku taliyeen Socdaalka, Qaxootiga iyo Dhalashada Kanada (IRCC), si ay u buuxiyaan kuwa doonaya inay Kanada ku soo galaan safaro gaagaaban.
Codsiga fiisaha Kanada waa beddelka habraac warqad ku salaysan. Sidoo kale, waxaad badbaadin kartaa safarka safaaradda Kanada, sababtoo ah Kanada Visa Online (eTA Canada) waxaa lagu soo saaraa emayl lid ku ah faahfaahinta baasaboorkaaga. Codsadayaasha intooda badani waxay ku buuxin karaan Codsiga Visaha Kanada in ka yar shan daqiiqo, wayna ka niyad jabaan Dawlada Kanada Booqashada Safaaradda Kanada si aad u dalbato habka warqadda ku saleysan. Waxaad u baahan tahay birawsar ku xiran internet-ka, ciwaanka iimaylka iyo Paypal ama kaarka Credit/Debit si aad u bixiso lacagaha online-ka ah.
Mar, Codsiga Dal-ku-galka Kanada waxa lagu buuxiyaa onlayn website, waxaa xaqiijiya socdaalka, qaxootiga iyo jinsiyada Kanada (IRCC) si loo hubiyo aqoonsigaaga. Inta badan Codsiyada Visaha Kanada waxaa lagu go'aamiyaa wax ka yar 24 saacadood qaarna waxay qaadan karaan ilaa 72 saacadood. Go'aanka Kanada Visa Online waxaa laguugu soo sheegay ciwaanka iimaylka ah ee lagu siiyay.
Marka natiijada Kanada Visa Online la go'aamiyo, waxaad ku hayn kartaa diiwaanka iimaylka taleefankaaga ama daabaci kartaa ka hor intaadan booqan Markabka Cruise ama Gegida Diyaaradaha. Uma baahnid wax shaabad jir ah oo ku yaal baasaboorkaaga sababtoo ah shaqaalaha socdaalka ee madaarku waxay ku hubin doonaan fiisadaada kombiyuutarka. Waxaad u baahan tahay inaad hubiso in tafaasiisha ku jirta Codsiga Visaha Kanada ee degelkan ay ku habboon yihiin sida magacaaga koowaad, qoyskaaga, xogtaada dhalashada, lambarka baasaboorka iyo arrinta baasaboorka iyo taariikhda uu dhacayo baasaboorka ay khusayso si looga fogaado in lagugu diido garoonka diyaaradaha ee wakhtiga duulimaadka.
Ayaa dalban kara eTA ee Kanada
Kaliya muwaadiniinta wadamada soo socda ayaa ah laga dhaafay helitaanka Visa si loogu safro Kanada waana inay ka dalbataa eTA Kanada.
Muwaadiniinta Kanada iyo Mareykanka waxay u baahan yihiin oo keliya Baasaboorradooda Kanada ama Mareykanka si ay ugu safraan Kanada. Deganeyaasha Joogtada ah ee sharciga ah ee Mareykankahase yeeshe, yaa haysta a Kaarka Cagaaran ee Mareykanka, waa inuu dalbadaa Kanada eTA.
Kaliya kuwa booqdayaasha ah ee Kanada ugu dhoofaya diyaarad iyada oo loo marayo duulimaad ganacsi ama mid kiraysan ayaa u baahan inay dalbadaan eTA-ga Kanada.
Br. Virgin waa.
Boqortooyada Ingiriiska - Brit. dibada terr.
ETA-da Kanada waxay leedahay afar nooc, ama haddii si kale loo dhigo, waad dalban kartaa Kanada eTA marka ujeeddada booqashadaada ee waddanka ay tahay mid ka mid ah kuwan soo socda:
Gadiidka ama shaqada laga raro marka ay tahay inaad ku hakato gegada diyaaradaha ee Kanada ama magaalo muddo kooban illaa duulimaadkaaga xiga ee aad ku aadeyso.
Dalxiiska, indha indheynta, booqashada qoyska ama asxaabta, imaatinka Kanada safar iskuul, ama dhigashada koorso gaaban oo aan ku abaalmarin wax dhibco ah.
Waayo, ganacsi ujeeddooyin, ay ka mid yihiin shirar ganacsi, ganacsi, xirfadle, cilmi, ama shir waxbarasho ama heshiis, ama dejinta arrimaha guryaha.
Waayo, daaweyn qorsheysan isbitaalka Kanada.
Macluumaadka looga baahan yahay Kanada eTA
Codsadayaasha eTA ee Kanada waxay u baahan doonaan inay bixiyaan macluumaadka soo socda waqtiga buuxinta khadka tooska ah Foomka Codsiga eTA ee Kanada:
Macluumaadka shaqsiyeed sida magaca, goobta dhalashada, taariikhda dhalashada
Lambarka baasaboorka, taariikhda la soo saaray, taariikhda uu dhacay
Macluumaadka xiriirka sida cinwaanka iyo emaylka
Kahor intaadan dalban Kanada eTA
Socotada doonaya inay ka codsadaan khadka tooska ah Kanada eTA waa inay buuxiyaan shuruudaha soo socda:
Baasaboor ansax ah oo lagu safro
Baasaboorka codsaduhu waa inuu shaqeeyaa ugu yaraan saddex bilood oo ka baxsan taariikhda bixitaanka, taariikhda marka aad ka baxdo Kanada.
Baasaboorka sidoo kale waa inuu kujiraa bog banaan si Sarkaalka Kastamku u shaabadeeyo baasaboorkaaga.
ETA-gaaga Kanada, haddii la oggolaado, wuxuu ku xirnaan doonaa Baasaboorkaaga saxda ah, sidaa darteed waxaa sidoo kale lagaa doonayaa inaad haysato Baasaboor ansax ah, oo noqon kara Baasaboor Caadi ah, ama Rasmi ah, Dibloomaasiyadeed, ama Baasaboor Adeeg ah, oo dhammaantood laga helo waddamada u qalma .
Aqoonsi Email oo ansax ah
Codsaduhu wuxuu ku heli doonaa Kanada eTA emayl, sidaa darteed aqoonsi Email oo ansax ah ayaa looga baahan yahay inuu ku helo Canada eTA. Foomka waxaa lagu buuxin karaa booqdayaasha doonaya inay yimaadaan adoo gujinaya halkan eTA Canada Visa Codsiga foomka.
Habka of Payment
Tan iyo markii ay eTA Canada Iyadoo loo sii marayo foomka codsiga waxaa laga heli karaa oo keliya khadka tooska ah, iyada oo aan lahayn warqad u dhiganta, kaarka amaahda / debit ansax ah ama koontada PayPal ayaa loo baahan yahay.
Dalbashada Kanada eTA
Muwaadiniinta Ajaanibta ah ee u qalma ee doonaya inay u safraan Kanada waxay u baahan yihiin inay ka dalbadaan eTA-da Kanada khadka tooska ah. Nidaamka oo dhami waa mid ku saleysan websaydhka, laga bilaabo arjiga, lacag bixinta, iyo soo gudbinta si loo ogeysiiyo natiijada dalabka. Codsaduhu waa inuu buuxiyo foomka dalabka eTA ee Kanada faahfaahinta laxiriira, oo ay kujiraan faahfaahinta xiriirka, faahfaahinta safarka hore, faahfaahinta baasaboorka, iyo macluumaadka kale ee asalka ah sida diiwaanka caafimaadka iyo dambiyada. Dhammaan dadka u safraya Kanada, iyadoon loo eegin da ', waa inay buuxiyaan foomkan. Marka la buuxiyo, codsaduhu waa inuu sameeyaa lacagta dalabka eTA adoo adeegsanaya kaarka amaahda ama kaarka deynta kadibna gudbinaya arjiga. Inta badan go'aannada waxaa lagu gaaraa 24 saacadood gudahood codsadaha waxaa lagu ogeysiiyaa emayl laakiin kiisaska qaarkood waxay qaadan karaan dhowr maalmood ama toddobaadyo si ay u shaqeeyaan. Waxaa ugufiican in aad dalbato eTA-ga Kanada isla marka aad dhameyso qorshooyinkaaga safarka oo aan ka dambeyn 72 saac ka hor intaadan jadwalka u gelin Kanada . Go'aanka kama dambaysta ah ayaa lagugu soo ogeysiin doonaa emayl iyo haddii ay dhacdo in dalabkaaga aan la oggolaan waxaad isku dayi kartaa inaad dalbato Visa-ha Kanada.
Mudo intee le'eg ayey arjiga Canada eTA ku qaadataa ka shaqeynta
Waxaa lagugula talinayaa inaad dalbato eTA Kanada ugu yaraan 72 saacadood ka hor intaadan qorshayn inaad dalka soo gasho.
Ansaxnimada Kanada eTA
ETA ee Kanada waa shaqeynaya muddo dhan 5 sano laga bilaabo taariikhda la soo saaray ama ka yar haddii Baasaboorka uu elektiroonig ahaan ugu xiran yahay uu dhacayo ka hor 5ta sano. ETA waxay kuu ogolaaneysaa inaad joogto Kanada ugu badnaan 6 bilood markiiba laakiin waad u isticmaali kartaa inaad ku soo booqato dalka si isdaba joog ah muddada ay shaqeyneyso. Si kastaba ha noqotee, muddada dhabta ah ee laguu oggolaan doono inaad joogtid wakhti waxaa go'aamin doona saraakiisha xuduudaha iyadoo kuxiran ujeeddadaada booqashada waxaana lagugu shaabadeyn doonaa Baasaboorkaaga.
eTA ee Kanada ayaa looga baahan yahay si aad u raaci karto duulimaad Kanada ah maadaama aadan la'aanteed raaci karin duulimaad kasta oo Kanada ku socda. Si kastaba ha ahaatee, Socdaalka, Qaxootiga iyo Jinsiyadaha Kanada (IRCC) ama Saraakiisha xadka Canada waxay kuu diidi kartaa gelitaanka garoonka diyaaradaha xitaa haddii aad tahay haystaha eTA ee Kanada oo la ansixiyey haddii wakhtiga la soo galo:
ma lihid dukumentiyadaada oo dhan, sida baasaboorkaaga oo loo habeeyay, kaas oo ay hubin doonaan saraakiisha xadka
haddii aad keentid khatar caafimaad ama mid maaliyadeed
iyo haddii aad leedahay taariikh dembi/argagixiso hore ama arrimo socdaal oo hore
Haddii aad diyaar u tahay dhammaan dukumeentiyada looga baahan yahay Kanada eTA oo aad la kulanto dhammaan shuruudaha u-qalmitaanka eTA ee Kanada, markaa waa inaad si fudud uga codsan kartaa khadka tooska ah Kanada eTA oo foomkiisu yahay mid fudud oo toos ah. Haddii aad u baahan tahay wax caddayn ah waa inaad la xiriir caawimaadkeena caawimaad iyo hagis.
Dukumiintiyada codsadaha eTA ee Canada laga weydiin karo soohdinta Kanada
Macnahiisu yahay iscaawinta naftooda
Codsadaha waxaa laga codsan karaa inuu keeno caddeyn muujineysa inay dhaqaale ahaan taageeri karaan oo ay isdifaaci karaan inta ay Kanada joogaan.
Tikidka duulimaadka / celinta
Codsadaha waxaa laga yaabaa in loo baahdo inuu muujiyo inay damacsan yihiin inay ka baxaan Kanada kadib markay dhamaatay ujeedadii safarka ee Canada eTA lagu dabaqay.
Haddii codsaduhu aanu haysan tigidh sii socda, waxay soo bandhigi karaan caddaynta lacagaha iyo awoodda uu ku iibsan karo tikidhada mustaqbalka.
Faa'iidooyinka Codsashada khadka tooska ah
KALIYA QAAR KA MID AH FAA'IIDOOYINKA UGU MUHIIMSAN EE DALBADASHADAADA CADAADAADA eTA ONLINE
24/365 Codsiga khadka tooska ah.
Waqti xadidan ma leh.
Dib u eegista arjiga iyo sixitaanka khubarada fiisada kahor intaan la gudbin.
Habka codsiga la fududeeyay.
Saxida macluumaadka maqan ama khaldan.
Ilaalinta asturnaanta iyo qaab nabdoon.
Xaqiijinta iyo xaqiijinta macluumaadka dheeraadka ah ee loo baahan yahay.
Taageero iyo Caawinaad 24/7 oo emayl ah.
Dib-u-soo-celinta emaylka ee eVisa haddii ay dhacdo khasaaro.
Soocelinta Adeegga haddii eVisa-kaaga la diido.
Majiro lacag dheeri ah oo macaamil xawaare Bangiga oo ah 2.5%.
ETA DALALKA U QALMAN
HABKA CODSIGA eTA
Codsiga fiisaha eTA CANADA
CANADA eTA SHURUUDAHA
NOOCYADA CANADA eTA
VISA BOOQDE VISA
CANADA VISA KAADHKA Cagaaran
VISA KA DIB ETA CANADA
CANADA SHAQAYNAYSA Visaha fasaxa
DHULKA CALINTA MAAPLE
OKTOBERFEST EE CANADA
SAFARKA CANADA OO JOOGTA AH
HOKIYADA ICE EE CANADA
Macmacaanka ugu sarreeya KANADA ee loogu talagalay booqdayaasha
Hagaha dalxiiska ee CANADA ATLANTIC
LA CANADA - Jasiiradaha MAGDALEN
WAA INAAD TAHAY Tilmaamaha
WAA INAAD ARAGTAA ONTARIO
WAA IN LAGU ARKAA VICTORIA
WAA IN LA EEG QUEBEC
WAA INAAD ARAGTAA MANITOBA
WAA IN AAD aragtaa BRUNSWICK CUSUB
WAA INAAD aragtaa NEWFOUNDLAND & LABRADOR
WAA IN ARAG CALGARY
© waxaa iska leh: www.canada-visa-online.org
Afeef: Canadian eTA oo ay soo saartay degelkan ganacsi waxaa si toos ah loogu adeegsadaa websaydhka Dowladda Kanada. Socdaalka, Qaxootiga iyo Jinsiyadaha Kanada (IRCC) uma magacaabin www.canada-visa-online.org si toos ah, si dadban ama si gaar ah. Khidmadda khidmadda ayaa laga qaadaa adeegyadayada iyo Visa Levy-ka Dawladda ee loogu talagalay kuwa ka codsada degelkan.